Indawo yokuzenzela ukutya + igadi - I-Airbnb
Indawo yokuzenzela ukutya + igadi
Schnarrndorf, Oberösterreich, Austria
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMaria
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMaria iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ilungele abakhenkethi kunye (abaqeshisa) abasebenzi abafuna indawo yokuhlala enefenitshala. Indlu eyi-60m² ibonelela ngebalcony, ukufikelela kwi-intanethi simahla, iTV, isomisi seenwele, indawo yokupaka kunye nekhitshi elixhotyisiweyo-cum-igumbi lokuhlala elinabantu aba-4 ubuninzi.
Uneminyaka engama-30 ubudala, unendlu yokuzenzela ukutya, ekwimeko entle kakhulu kwaye ibonelela ngayo yonke into oyifunayo ngeholide ongasoze uyilibale okanye ukuhlala ixesha elide.
Abanini-mhlaba abanobubele bahlala bekho kuzo naziphi na izicelo.
Indawo entle nethe cwaka ikumema ukuba uphumle kwaye wonwabe. Kodwa kukwakho intabalala yabantu abanomdla: ukusuka ekukhweleni intaba ukuya kwibhayisekile okanye ukuqubha kuninzi ekufuneka kwenziwe kule ndawo. Okufanelekileyo ukukhankanywa ziimonki kunye neemonki kwindawo yethu, ekukufaneleyo ukubonwa nokutsala abakhenkethi abaninzi.
4.73 out of 5 stars from 23 reviews
4.73 · Izimvo eziyi-23
Ukuhamba ngemizuzu eli-10 usembindini welali enevenkile encinci kakhulu, indlu yeendwendwe, ikhefi kunye nezinto ezimbalwa zokuthengisa. Iidolophu ezinkulu kunye nesixeko saseWels sinokufikelelwa ngemoto okanye ngebhasi kwimizuzu emi-5-15.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Schnarrndorf